LLC "Agrofirma KRiMM" - Magazin "Usoro nduku"
в Akụkọ Mmeri
LLC "Agrofirma KRiMM" bụ otu n'ime ndị na-emepụta nri na mkpụrụ poteto na akwụkwọ nri n'ubi na Russia. N’afọ 2020, mkpokọta akuku nke ihe ubi ghọrọ 162 tọn. Ke adianade do, ugbo na-emekwa ụfọdụ ihe ndị na-akọ ọka, rapeseed na salads. Mkpokọta ebe a ghara mkpụrụ karịrị 822 puku hectare. Enterlọ ọrụ ahụ na-agụnye mgbagwoju robotic nke na-ejuputa na akụrụngwa akụrụngwa, akara maka ịsacha / polishing ihe oriri, nnukwu ụlọ nkwakọba ihe oriri na Russia nwere ụlọ ndị jụrụ oyi na ụlọ nyocha pụrụ iche nke mkpụrụ mbụ na-eto eto nduku "SoKar" (poteto varietal), Agriclọ Ọrụ Ugbo nke Russia, nke na-enye ụlọ ọrụ ahụ mkpụrụ osisi mara mma: site na ịnweta minitubers site na osisi ule-tube iji rụchaa ngwaahịa.
Ọ bụ ya mere ụlọ ọrụ ugbo "KRiMM" ji adabere na mmepe nke nhọrọ na usoro mkpụrụ na-eto eto nke ọkwa Europe, nwee ike ịsọ mpi ọ bụghị naanị na ụlọ kamakwa n'ahịa mba ọzọ.
Akụkụ ọzọ dị mkpa bụ nduku nhazi nduku. Ihe oru ngo a puru iche enweghi uzo ozo na mpaghara nke Russian Federation. Ikike nhazi kwa afọ bụ tọn 15 nke ngwaahịa ndị emechara, maka maka mkpa mmepụta yana maka ire ere na ngalaba HoReCa na B000B. A kwadebere osisi ahụ nwere akara ngosi dị elu nke na-ewepụta ngwaahịa nduku dị iche iche dịka poteto ndị e tere mmanụ nwere ihe ndị sitere n'okike nwere ike ịdị ndụ ruo ụbọchị 2 n'okpuru akara Ọkara-Ejiri ya, na Fresh Cut - poteto ndị a napụrụ agbazi na ndụ ha ruo ụbọchị 60. Maka imepụta ha, a na-eji ụdị poteto ahọrọ ahọrọ nke nwere ezigbo uto.
Agrofirma KRiMM LLC na-agagharị na ọkwa ọkwa dị elu nke mmepe mmepe n'usoro maka afọ 20. Ntọala ya na 1999 na-adabere na ugbo ọrụ ugbo "Niva", taa ụlọ ọrụ ahụ bụ otu n'ime ọrụ ugbo kachasị maka ịmị mkpụrụ na poteto na akwụkwọ nri ọ bụghị naanị na mpaghara Tyumen, kamakwa na Russia. Na mbu, azụmaahịa a na-akọ ugbo gbadoro ụkwụ na ụkpụrụ nke ịkpa iche iche na ịta ahụhụ, mmejuputa nke rụzuru nke sayensị na teknụzụ, asọmpi nke akụ na ụba na ogo nke ngwaahịa ndị arụpụtara.
Taa ụlọ ọrụ ugbo na-eji nhọta nhọrọ kachasị mma, na-etinye teknụzụ kachasị elu nke mkpụrụ na akwukwo nri na-eto eto, ụdị kachasị ọhụrụ nke igwe na akụrụngwa pụrụ iche. Dịka ọmụmaatụ, na ụlọ nyocha SoCar na ọkwa niile nke mgbasa nduku, a na-achịkwa njikwa mma site na iji PCR analysis (polymerase chain reaction), yana ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay). Laboratorylọ nyocha ahụ na-ewepụta puku osisi 1 nnwale ule kwa afọ iji nweta minitubers 000. N'ihi ya, nchịkọta ugbo nke poteto gụnyere ụdị 000 - Rosara, Zekura, Karatop, Gala, Innovator, Lux, Bravo, Red Scarlett, wdg.
Mpaghara n'okpuru mkpụrụ nduku karịrị 950 ha, nkezi mkpụrụ bụ 27 t / ha.
Ihe omuma ohuru kachasi na teknụzụ maka imepụta ihe ọkụkụ na ụlọ ọrụ ugbo "KRiMM" bụ usoro nhazi usoro usoro ọfụma.
Ugbo a nwere hekta 2500 nke ala mmiri gbara. Ndị ọkachamara na-enyocha mmiri ala ma na-abịa na nkwubi okwu na ogbugba mmiri n'ubi bụ sayensị dum. Ọrụ dị mkpa na mmepe nke teknụzụ ọhụrụ na ụlọ ọrụ a na-arụ site na nlekota mgbe niile nke ala ala ọmụmụ, acidity ya - ọkachasị mgbe ị na-akụ nduku na kabeeji.
Kwa afọ, a na-arụ ọrụ na mpaghara nke Agrofirm iji meziwanye usoro nke ala, maka ebumnuche ndị a n'oge oyi, ihe ruru 500 tọn (!) Of peat kwa 1 hectare na-eweta.
N'ihi ihe ọhụrụ ndị a, ọbụnadị n'afọ ndị siri ike, ugbo ahụ na-enweta ihe karịrị 150 puku tọn nke ezigbo ihe. N'ime afọ atọ gara aga, nnukwu ihe a na-ewepụta poteto agafeela 100 tọn! Ọ dị mkpa na Agrofirma na-eji mkpụrụ nke ụdị "Elite" maka ịgha poteto a pụrụ ire ere. Nke a na - enye gị ohere ịmewanye ikike mmepụta, meziwanye ọnọdụ ọrụ nke ndị ọrụ, taa enwere 000 (!) Ndị mmadụ ma nye ọrụ ndị ahịa dị mma.
Atụmatụ a họọrọ, ịrụsi ọrụ ike nke otu a, ọrụ itinye ego siri ike wetara ụlọ ọrụ ugbo "KRiMM" na ọkwa ụwa nke mmepụta ihe ọkụkụ ma hụkwa afọ ojuju nke mmụba na-eto eto nke ndị na-azụ ahịa. Taa, a na-enye ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ n'ọtụtụ mpaghara Russia: site na Kaliningrad ruo Vladivostok, yana mba CIS na Serbia.
isi: Dabere na ihe ndị sitere na akwụkwọ akụkọ nke Potato Union
Tags: Agrofirm KRiMMmmepụta mkpụrụ na okpokoro okpokoro
"Smart agronomy bụ otu n'ime ụzọ kacha mma isi nwetaghachi ego gị," Ian Wilson, onye na-elekọta Tulloch Farms, nke dị nso na-ekwu.
Anyị na-aga n'ihu na-ebipụta ihe pụrụ iche sitere na WPC (World Potato Congress), na-ekwu maka nhazi nke usoro mmepụta mkpụrụ nduku nke ọma na Africa. Ụwa...
Ọrụ ugbo nke oge a abụghị naanị shọvel na hoes, kamakwa akụrụngwa ọhụrụ nke chọrọ ihe ọmụma na nkà ụfọdụ....
Ike McCain Ọ bụ ụmụnna McCain na Canada tọrọ ntọala na 1957. Ọrụ ya dabere na tesis dị mfe - ...
Ụlọ ọrụ nke mpaghara ahụ, bụ ndị nwetara nnukwu nsonaazụ na ọrụ ha na-esote nsonaazụ nke afọ ugbo, nyere ya iko "Golden Ear". Onye osote onye isi oche nyere ndị meriri ihe nrite a.
Sergey Averin, agronomist nke Dmitrovsky Potato LLC Ugbo anyị, LLC Dmitrovsky Potato, dị na Nekrasovsky District nke Yaroslavl Region. Onye nlekọta...
Tọrọ ntọala na 1976 na Netherlands, ihe ịga nke ọma nke Tummers Food Processing Solutions dabere na ọrụ ndị ahịa. Ihe karịrị afọ 40 ...
Nduku nchedo sayensị
A na-eme atụmatụ ịwepụta ihe ruru 140 nde rubles maka ogige ọrụ ubi ọhụụ